AlphaPlot, programa famakafakana ny angon-drakitra sy ny grafika siantifika | Ubunlog
AlphaPlot, programa famakafakana ny angon-drakitra sy ny grafika siantifika
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny AlphaPlot isika. Ity dia fampiharana sary sy famakafakana angona siantifika, izay loharano misokatra, maimaim-poana ary azo alaina ho an'ny Gnu / Linux, Windows ary Mac OS X. Amin'izany dia afaka mamorona karazana sary 2D sy 3D isan-karazany avy amin'ny angon-drakitra asehonay izahay. Ny fampiharana dia afaka mamorona grafika amin'ny alàlan'ny rakitra ASCII, ampidirina amin'ny tanana na kajy mampiasa formulas. Ao anatin'izany dia hahita fampiononana ho an'ny scripting, fanitsiana curve, fanitsiana multipeak ary maro hafa koa isika.
Nanomboka tamin'ny taona 2016 ny fampivoarana ity programa ity ho toy ny fiforonan'ny SciDAVis 1.D009. Ny AlphaPlot dia mikendry ny ho fitaovana famakafakana sy fanehoana an-tsary ny angon-drakitra, ahafahan'ny fitsaboana ara-matematika mahery vaika sy ny fijerena ny angon-drakitra., raha manolotra interface tsara an-tsary mora ampiasaina sy ECMAScript-tahaka ny scripting interface ho an'ny mpampiasa efa mandroso.
Ny angon-drakitra vokarina amin'ity programa ity dia voatahiry ao anaty takelaka, izay mifototra amin'ny andry (matetika ny sanda X sy Y ho an'ny sary 2D) na matrices (ho an'ny sary 3D). Angonina ho tetikasa iray ny takelaka, tabilao ary fanamarihana ary azo alamina amin'ny fampiasana lahatahiry.
1 Toetra ankapoben'ny AlphaPlot
2 Mametraka AlphaPlot amin'ny Ubuntu
2.1 Amin'ny alàlan'ny PPA
2.2 Amin'ny alàlan'ny Flatpak
2.3 Toy ny AppImage
Toetra ankapoben'ny AlphaPlot
Ny GUI fampiharana dia mampiasa ny fitaovana Qt. Ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny teny anglisy.
Afaka miara-miasa isika Tetika 2D mandroso sy tetika 3D miorina amin'ny OpenGL.
Hamela antsika hampiasa muParser macros.
Azo atao Fanafarana rakitra ASCII.
Hanana isika FFT sivana.
Ny programa dia hamela antsika miasa miaraka amin'ny sary, ary hanome antsika fahafahana hanondrana azy ireo mora amin'ny endrika sary isan-karazany (PDF, SVG, BMP, JPG, PNG, TIFF, sns ...)
Amin'ity rindrambaiko ity dia afaka manao a famakafakana statistika mandroso noho ny toetrany.
Hanana fahafahana hiara-miasa isika fametahana curve linear sy non-linear, miaraka amin'ny lanja sy fanombanana ny lesoka statistika masontsivana fanitsiana.
Izany koa dia ahafahantsika miasa miaraka amin'ny fanitsiana faratampony maro, miaraka amin'ny profiles tampony samihafa.
endri-javatra QtScripts ho an'ny fanodinkodinana sy fikarakarana ny angon-drakitra takelaka.
Ny programa dia lampihazo miampita. Miasa amin'ny rafitra Windows, Mac OS X ary Linux / Unix.
Afaka mampiditra ny customization to property editor.
Santionany amin'ireo endri-javatra amin'ity programa ity ireo. Ireo rehetra ireo dia azo jerena amin'ny antsipiriany avy amin'ny pejy Sourceforge an'ny tetikasa.
Mametraka AlphaPlot amin'ny Ubuntu
Amin'ny alàlan'ny PPA
Ao amin'ny Ubuntu dia hanana fahafahana hametraka ity programa ity amin'ny alàlan'ny PPA azy isika. HO AN'NY ampio ny tahiry takiana, amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia ilaina ny manoratra:
sudo add-apt-repository ppa:devacom/science
Rehefa avy nanampy ny PPA sy manavao ny rindrambaiko azo alaina avy amin'ny repository izay nataontsika tao amin'ny rafitra misy antsika dia afaka izao miroso amin'ny fametrahana programa. Hanao izany amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny terminal iray ihany izahay:
sudo apt install alphaplot
Rehefa vita ny fametrahana dia tsy misy afa-tsy atombohy ny programa mitady ny sinyo ao amin'ny ekipanay. Afaka manomboka izany koa isika amin'ny fanoratana ao amin'ny terminal:
Para mamafa fitoeram-bokatra izay ampiasaina amin'ny fametrahana, amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia ilaina ny manoratra:
sudo add-apt-repository -r ppa:devacom/science
Ankehitriny, mba hanafoanana ny programa, ao amin'ny terminal iray ihany no hanoratantsika:
sudo apt remove alphaplot; sudo apt autoremove
Amin'ny alàlan'ny Flatpak
Raha mampiasa Ubuntu 20.04 ianao, ary mbola tsy manana an'ity haitao ity alefa amin'ny solosainao, afaka manohy ianao The Guide Nisy mpiara-miasa nanoratra momba izany tao amin'ity bilaogy ity vao haingana.
Rehefa afaka mametraka fonosana ianao Flatpak Amin'ny rafitrao, ao amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia mila manatanteraka ny mametraka baiko:
flatpak install flathub io.github.narunlifescience.AlphaPlot
Rehefa vita ny fametrahana dia azo jerena ao amin'ny rafitra izao ny mpandefa. Azonao atao koa ny manatanteraka ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal to atombohy ny programa:
flatpak run io.github.narunlifescience.AlphaPlot
Raha mahaliana anao ianao esory ny fonosana AlphaPlot Flatpak, ilaina ihany ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ao aminy:
sudo flatpak uninstall io.github.narunlifescience.AlphaPlot
Toy ny AppImage
Ho fanampin'ireo fomba voalaza etsy ambony ireo, ny mpampiasa dia hanana ny fahafahana misintona AlphaPlot amin'ny endrika fisie .AppImage avy amin'ny pejy mamoaka an'ny tetikasa. Ho fanampin'ny fampiasana ny navigateur, azontsika atao ihany koa ny mahazo ny dikan-teny farany navoaka androany, manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka izany. wget toy izao manaraka izao:
Rehefa vita ny fampidinana dia ilaina ny mifindra any amin'ny lahatahiry izay namonjy ny rakitra, ary avy eo manome anao ny alalana ilaina miaraka amin'ny baiko:
sudo chmod +x AlphaPlot-1.011-alpha-release-glibc2.29-x86_64.AppImage
Amin'izao fotoana izao dia afaka atombohy ny programa amin'ny fipihana indroa eo amin'ny rakitra na manoratra amin'ny terminal:
Mba hahazoana fampahalalana momba ity programa ity na momba ny fampiasana azy dia afaka mandeha any amin'ny su tranonkala, dia la Wiki wiki, dia su Repository GitHub na ny azy pejy an'ny sourceforge.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » AlphaPlot, programa famakafakana ny angon-drakitra sy ny grafika siantifika
EverSticky, fampiharana naoty mipetaka izay mirindra amin'ny Evernote
Elementary OS 6.1 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao